အပျင်းပြေဖို့ ပုံတစ်ပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အပျင်းပြေဖို့ ပုံတစ်ပုဒ်
Posted by မောင် ပေ on Oct 22, 2012 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 25 comments
ရှောင်လို့ မရတဲ့ ဘီယာသောက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာ အဖော်အဖြစ်လိုက်သွားထိုင်ပေးရင်း ၊ ည၁၁နာရီလောက်ကြ ကိုယ်ထိုင်ပေးရတဲ့ ဆရာသမားများက အိမ်ကွင်းပြန်ကစားကြဖို့ ဆိုပြီး အလျှိုလျှိုပြန်သွားကြတယ် ။ တစ်ဆိုင်လုံးမှာလဲ ထိုင်သောက်နေတာဆိုလို့ကျုပ် တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တာ ။ ကျုပ်မှာတော့ သူရို့ နဲ့ ပျိုးခဲ့တဲ့ အရှိန်ကလေးကရနေ ၊ ပြန်ကလဲမပြန်ချင်သေးတာနဲ့ .. ဘီယာလေးတစ်ခွက်လောက်ဆက်သောက်နေတုန်း.. ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့နံဘေးက အသက်၅၀ခန့် ရှိပုံရတဲ့ ကချင်အဘိုးကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ် ။ ကျောမှာလဲ ပလက်စတစ်အိတ်အကြီးကြီးတစ်လုံးကို လွယ်ထားတာကို မြင်တော့ ကျုပ်လဲ သူတောင်းစားမှတ်ပြီး ၊ ၂၀၀ကျပ်တန် တစ်ရွက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ အဘိုးကြီးက ကျုပ်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို မယူပဲ
“ လူလေးရယ်.. အဘရေဆာလွန်းလို့ ၊ အဘကို ဘီယာတစ်ခွက်လောက် တိုက်ပါလားတဲ့ ”
ကျုပ်လဲ သူ့ ပုံကြည့်ရတာ သနားသွားတာနဲ့ ၊ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဘီယာတစ်ခွက်မှာပေးလိုက်တယ် ။ အဘိုးကြီးလဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့ ဝိုင်း ၊ ကျုပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး
“ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ လူလေးရယ် ၊ အဘ မင်းကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါမယ် ”
“ ဒီမယ် အဘိုးကြီး…ကျုပ်ဖီးလ်နဲ့ ကျုပ် အေးအေးလူလူထိုင်နေတာ ၊ ကျုပ်တိုက်တဲ့ ဘီယာသောက်ပြီးတော့ ကျုပ်ကို ယစ်ဖို့ တော့ မကြံနဲ့ ၊ သောက်ထားတဲ့ ခွက်နဲ့ အရိုက်ခံရမယ်မှတ် ”
“ မယစ်ရဲပါဘူး လူလေးရယ် ၊ အဘက လူလေး အပျင်းပြေစေဖို့ သဘောနဲ့ ပါ ၊ လူလေး နားမထောင်ချင်ဘူး ဆိုရင်လဲ ၊ အဘ မပြောတော့ပါဘူးလေ ”
ကျုပ်လဲ အဘိုးကြီး ဘာပုံပြင်များပြောပြမှာပါလိမ့်လို့ ၊ နဲနဲစိတ်ဝင်စားသွားပြီး ၊ ပြောပြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အဘိုးကြီး အတွက် မှာထားတဲ့ ဘီယာခွက်ရောက်လာတာနဲ့ ၊ အဘိုးကြီး တစ်ကျိုက်ကောက်မော့တာ တစ်ဝက်ကျိုးပါလေရောလား။
အဘိုးကြီး ကြည့်ရတာ ဘီယာကို ဘယ်ကမ္ဘာကတဲက ငတ်ပြတ်လာလဲ မသိဘူး ၊ သူ့ မေးမှာ ပေသွားတဲ့ ဘီယာအမြုပ်တွေကို သူ့ လက်နဲ့ ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း
“ ဒီလိုကွဲ့ လူလေးရဲ့ … တိုးနယား ဆိုတာ ကို လူလေးသိတယ်မို့ လား ”
“ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးတွေမှာ တရုတ်ဘုံကျောင်းကလူတွေ ကတဲ့ အရုပ်ကြီးကို ပြောတာမလား ”
“ အင်း.. အဲဒါနဲ့ တော့ ဆင်မလား လို့ အဘ မပြောတတ်ပေမယ့် ၊ အဲဒီ တိုးနယား ဆိုတဲ့အကောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရာဇဝင် ကို အခု အဘပြောမလို့ ကွဲ့”
“ အင်း လုပ်ပါဦး… နားထောင်ကြည့်ရသေးတာပ ”
“ တိုးနယား ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်က ထိုးထား ဆိုတဲ့ စကားကနေ ဆင်းသက်လာတာကွဲ့ ”
“ ဗျာ… ထိုးထား .. ဟုတ်လား ”
“ အိမ်း… ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ၊ ဘယ်လောက်အထိ ရှေးကြသလဲဆိုရင် ၊ ဒီလောကကြီးမှာ လူသားတွေတောင် ပေါ်ကာစရှိတဲ့ အချိန်လောက်တုန်းကပေါ့ကွယ် လူသားတွေရှိနေပြီလားတောင် မသေချာသေးတဲ့ အချိန်ပါကွယ် …. ”
ဟုဆိုကာ သူ့ ပုံပြင်ကို ဆက်တိုက်ပြောပြတော့တယ် ။ ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက် ပြောနေတဲ့ ပုံနဲ့ ရေးရင် စာဖတ်တဲ့သူ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ ၊ အဘိုးကြီး ပြောပြသမျှကိုပဲ စာစီရေးလိုက်ပါတယ်။
…. ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပေါ့ ၊ အဲ့တုန်းက လူသားတွေ ပေါ်နေပြီလား ၊ မပေါ်သေးဘူးလား ဆိုတာ အတိအကျ မသိသေးတဲ့အချိန် ၊ ဒီလောကမှာ ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် အကောင်ပေါင်းစုံကတော့ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် စကားပြောကြသတဲ့ ၊ နောက်ပြီး အမျိုးအစားမတူလဲ သူရို့ တွေဟာ လိင်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းလေ့လဲ ရှိကြတယ် .. ဘာအကောင်တွေလဲ ဆိုတော့ ၊ ဒီနေ့ တို့ ခေတ်က ရှိသမျှ အကောင်တွေအားလုံးပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် အကောင်တွေရဲ့ နာမည်အခေါ်အဝေါ်တွေကတော့ ဒီနေ့ ခေါ်နေတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ တော့ အားလုံးမတူသေးဘူး ။ အဲ့မှာတုန်းက တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ အများကြီး ရှိကြတဲ့ အထဲမှာ ၊ တိရစ္ဆာန်တော်တော်များများကတော့ အချင်းချင်း တွေ့ ဆုံခေါ်ပြောလေ့ ရှိကြပေမယ့် ၊ “ ခြတု ” ဆိုတဲ့ အထီးသတ္တဝါတစ်ကောင်နဲ့၊ “ ငှက်ကုလားတုတ်မ ” ဆိုတဲ့ အမသတ္တဝါတစ်ကောင် ကိုတော့ တောထဲက အကောင်တွေဟာ ရှောင်လေ့ရှိကြတယ် ။ မလွဲသာလို့မရှောင်နိုင်တဲ့အဆုံးမှ မကောင်းတတ်လို့ခေါ်ပြောလုပ်ကြတဲ့ သဘောပေါ့ ။ အဲဒီ ခြတု ဆိုတဲ့ အကောင်ဟာ ဒီနေ့ ၊ တို့ တွေ့ နေတဲ့ သိနေတဲ့ “ ခြင်္သေ့ ” ဖြစ်နိုင်တယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ၊ အဲဒီ ခြတု ဟာ အသံသေးအသံညှောင်နဲ့ဟောင်တတ်တယ် ။ နောက်ပြီး ဟို ငှက်ကုလားတုတ်မ ဆိုတာလဲ ဒီနေ့ ငှက်ကုလားအုပ်မ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ သူကတော့ တွေ့ သမျှ အထီးအားလုံး လိုက်ပြီး ဖင်လှန်ပြသတဲ့ ။ တစ်ခုရှိတာက ခြတု နဲ့ ငှက်ကုလားတုတ်မ တို့ ဟာ တစ်ခါမှ မျက်နှာချင်းဆိုင် မတွေ့ ဖူးကြသေးဘူး ။ တောအုပ်ထဲမှာတစ်ခြားအကောင်ထီး အကောင်မ တွေဟာ ပေါင်းသင်းကြလို့ မျိုးတွေဘာတွေ ပေါက်ဖွားကြပေမယ့် ၊ ခြတု နဲ့ ငှက်ကုလားတုတ်မ တို့ ကတော့ ၊ ဒုံရင်း ဒုံရင်း ပါပဲ ။ သူရို့ ခဗျာလဲ အရွယ်ကလဲကြီးလာ ၊ အခြားအကောင်တွေ ပေါင်းသင်းကြတာမြင်တော့ အားကျမိကြပေမယ့် ၊ စင်ဂဲတွေပဲ ဖြစ်နေတယ် ။
တစ်ရက် တောအုပ်ထဲက ရေအိုင်လေးမှာ ခြတု နဲ့ငှက်ကုလားတုတ်မ တို့ ဟာ ရေလာသောက်ကြရင်း ဆုံကြတယ် ။ ခြတု က ထုံးစံအတိုင်း သူ့ အသံသေးအသံညှောင်နဲ့ငှက်ကုလားတုတ်မ ကို ဟောင်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ။ ငှက်ကုလားတုတ်မ က လဲ အားကျမခံ သူ့ ဖင်ပိုင်းဘက်ကို ခြတု ဘက်ကို လှည့်ပြီး စက်ဝိုင်းဝိုင်းပြတယ် ။ အဲဒီမှာ ခြတု လဲ ရင်ခုန်သံတွေ ဒိန်းတပ်တပ်ပေါ့.. သူ့ စိတ်ထဲမှာ ၊ ဒီဆော်ကြီး ရွတယ် ၊ ဖင်ကြီးက ကိတ်တယ်ပေါ့ ( မှတ်ချက် ယခုခေတ် စကားများဖြင့် သုံးနှုန်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည် ကို ရိုင်းသည်ဟု မထင်မှတ်ကြပါရန် )
ငှက်ကုလားတုတ်မ လဲ ခြတုလိုပဲ ၊ အချဉ်တော့ မိတော့မယ်ပေါ့ ။ တစ်ဘဝလုံး လင်မရခဲ့သမျှ .. ဒီအကောင်လေးတွေ့ တုန်း ဆွဲစိထားမှပဲ ဆိုပြီး စိတ်မှာတွေးသတဲ့ ။
အဲဒါနဲ့ရေသောက်အပြီး ရေအိုင်လေးဘေးမှာ ခြတု နဲ့ ငှက်ကုလားတုတ်မ တို့ ဟာ စကားလုံးများအထိအတွေ့ ကို ပဟေဌိအဖြေညှိကြသလို ၊ ရင်ခုန်သံခြင်း ဘယ်သူပိုမြန် အဖြေညှိကြရင်း ၊ အဲဒီ့နားလေးတင် ညားသွားကြလေရောတဲ့ …
နောက်နေ့ ကြတော့ ၊ သူရို့ နှစ်ကောင် လင်မယားမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တစ်တောလုံးကို လိုက်ကြေငြာတော့ ၊ တစ်တောလုံးရှိသမျှ အကောင်ထီး အကောင်မတိုင်းက ဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားကြတယ် ။ နို့ မို့ ဆို နှစ်ကောင်စလုံး အထီးကလဲ အထီးမို လို့၊ အမ ကလဲ အမမိုလို့တစ်တောလုံး ရှိသမျှ အိုအိုပျိုပျို လိုက်ကြံကြတာကိုး ။ ဒါနဲ့ တစ်တောလုံးက ဝမ်းသာအားရနဲ့သူရို့ နှစ်ကောင်အတွက်ဆိုပြီး ၊ ဝိုင်းလက်ဖွဲ့ ကြတယ် ။ ခြတု နဲ့ ငှက်ကုလားတုတ်မ ခဗျာမှာလဲ လက်ဖွဲ့ တွေ ရပြီးကတဲက သူရို့ နေတဲ့ ဂူကြီးထဲမှာပဲ နေလိုက်ကြတာ ၊ နှစ်လနဲ့ သုံးရက်တိတိပြည့်မှ ဂူထဲကနေ ပြန်ထွက်လာကြတယ်တဲ့ ။
အဲဒီမှာ သူရို့ တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ၊ ခြတုလက်ထဲမှာ အကောင်သေးသေးပိစိလေးတစ်ကောင်ပါ ပါလာတယ် ၊ တစ်တောလုံးက ရှိသမျှ အကောင်အားလုံးကလဲ ခြတုတို့ လင်မယား ရှိတဲ့ ဂူရှေ့ ကို ဝိုင်းအုံလာကြတယ် ။
ခြတုက သူ့ လက်ထဲ ကိုင်ထားတဲ့ အကောင်ပိစိလေးကို အကောင်အားလုံးမြင်အောင် မြှောက်ပြရင်းနဲ့..
“ ဒီနေ့ က စပြီး ၊ ကျုပ် ဒီ ဖင်ကြီးမ နဲ့ မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး ”
ဟေ…ဟာ…ဟမ် တစ်တောလုံး အံ့သြသွားကြသံ
ငှက်ကုလားတုတ်မ ကလဲ အားကျမခံ ၊ သူ့ ဖင်ကလေး နောက်ပစ်ပြီး စကားပြောလာတယ်
“ ကျွန်မ လဲ ဒီ ဂျလေဘီကောင်နဲ့ ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး ၊ ဘယ်နှယ့်လိုရှင်.. အားရှိ အိပ်ဖို့ လောက်ပဲ ခေါင်းထဲရှိတဲ့အကောင် ”
ဟေ…ဟာ..ဟမ် တစ်တောလုံး အံ့သြွားကြသံ
ပြီးတော့ တစ်တောလုံးက ကျွတ်စီကျွတ်စီ နဲ့ တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ ပြောသံတွေထွက်လာတယ်
အေးလေ.. ခြတု ဆိုတဲ့အကောင်က အားရှိအိပ်ဖို့ ချောင်းနေတယ်ဆိုတော့ ဟိုကောင်မ ဘယ်ခံနိုင်တော့မှာလဲ..နော
ဟာ.. အဲ့ကောင်မက ဖင်ဒီလောက်ကြီးတာ ၊ ကြာတော့ ခြတု လဲ ဒီတောင်ကို မောင်မထမ်းနိုင်တော့ဘူး ဆိုသလိုမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ
သို့ ဖြင့် ၊ တစ်တောလုံး တိုးတိုး ၊ တိုးတိုးဖြင့် တွတ်ထိုးပြောနေကြရာမှ ၊ ခြတု ၏ ညှောင်နာနာ ဟောင်သံကို ကြားလိုက်ကြရသောအခါ
“ ဒီ ကလေးဟာ ကျုပ်တို့ မွေးလာတဲ့ ကလေးပဲ ၊ ကျုပ်တို့ အခု ဆက်မပေါင်းတော့ဘူး ဆိုတော့ ၊ ဒီကလေး ကို ဘယ်သူ က ထိန်းရမလဲ မသိတော့ဘူး ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျုပ်ကလဲ မထိန်းချင်ဘူး ၊ ငှက်ကုလားတုတ်မ လဲ ထိန်းချင်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဆိုတော့ .. ဒီကလေးကို ခင်ဗျားတို့ တွေပဲ ဆက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် မွေးကြပေတော့ ”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ခြတု ဟာ သူ့ လက်ထဲက အကောင်ပေါက်စလေးကို တောကောင်တွေရှေ့ မှာ ချထားခဲ့ပြီး လစ်ထွက်သွားတယ် ။ ငှက်ကုလားတုတ်မကလဲ အားကျမခံ သူ့ ဖင်ကို ကော့ကော့ ကော့ကော့နဲ့ခြတု နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် အရပ်ဆီကို လစ်သွားပြန်တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ … တစ်တောလုံးက ရှိသမျှ အကောင်ပလောင်အားလုံးဟာ ခြတု တို့ လင်မယားထားသွားတဲ့ ကလေး ကို ဝိုင်းစောင့်ရှောက်ကြရတယ်တဲ့ ၊ အဲဒီကလေး ဟာ ကြီးလာတော့ ခေါင်းက ခြတု နဲ့ ဆင်တယ် ၊ ဖင်ကြတော့ ငှက်ကုလားတုတ်မ လို ကားကားကြီးနဲ့ ဆိုတော့ ၊ တောထဲကအကောင်အားလုံးဟာ အဲဒီအကောင်လေးကို “ထိုးထား” ဆိုပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင် နဲ့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့ ။
အဲဒီ ထိုးထား ဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ ခေတ်တွေပြောင်း အချိန်တွေကုန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီနေ့ ၊ မင်းတို့ ငါတို့ ခေါ်နေတဲ့ “တိုးနယား” ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပေါ့ကွယ် ။
ပုံပြင်အဆုံးမှာ ကျန်နေတဲ့ ဘီယာတစ်ဝက်ကို တစ်ဇွတ်ထဲ ကောက်မော့ပြီး ၊ ဘာမှမပြောမဆိုနဲ့အဘိုးကြီး ထလစ်သွားတယ် ။ ကျုပ်လဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ထိုင်ကျန်ခဲ့တယ် ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်တဲ့အခါမှ… အဘိုးကြီး ကျုပ်ဘက်ကို လှည့်ပြီး ..
“ လူလေး မင်းကိုခင်လွန်းလို့ ပြောပြတာနော်… ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပြန်မပြောနဲ့ .. ဟုတ်ပြီလား ”
အဲဒီလို အော်ပြောသွားသေးတယ် ။
အဘိုးကြီးက ဘယ်သူ့ မှ ပြန်မပြောနဲ့ လို့ မှာသွားပေမယ့် ၊ ကျုပ်ကတော့ ဂေဇက်က ချစ်မိတ်ဆွေ စာဖတ်သူများအတွက် ပြန်ရေးတင်လိုက်ပါတယ် ။
” တောထဲကအကောင်အားလုံးဟာ အဲဒီအကောင်လေးကို “ထိုးထား” ဆိုပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင် နဲ့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့ ”
အဲဒါလေး သိပ်မရှင်ဘူးဂျ …
ရေးတတ်လိုက်တာ… လို့ပြောချင်တဲ့စာမူလေး..။
ယခုလာမည့်အပတ် ဘောပွဲအတိတ်ကတော့ ဂိုးများဖက်က ရိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ပန်းဂေါ်ဖီ ဆိုတဲ့ ဘီယာဆိုင်မှာ အမြဲထိုင်ပြီး
ဘော့ပရစ်တီး ဝတ္ထုထဲက အဖိုးကြီးများ လား
အခုပုံပြောသွားတဲ့ဘိုးတော်က ဘော့ပရစ်တီးထက် ပိုလည်တယ်ဗျ
သူ့ကို ကြပ်ဖို့ ကြံလို့ကို မရသေးဘူး
ဆရာပေရေ ပုံပြင်လေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်မပြောပါဘူး။
ဘောလုံးကို နှစ်ဆင့်ကန်လိုက်သလိုဘဲ နော်
အဘကို ဘီယာ တစ်ဂျားတိုက်ရင် ပုံတစ်ပုဒ် မက ပြောပြမယ်
ကျုပ်လည်း ကြုံရင် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လောက် ပြောပြရဦးမယ် ..
ထူးထူးခြားခြား ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ ..
ကျုပ်က ဘီယာ တွေ ဘာတွေ မကြိုက်တော့
လက်ဖက်ရည် တစ်ဝိုင်းစာလောက်ဆို ရပါပြီ ..
ကျုပ်မန်းလေး လာဒဲ့အခါ နားထောင်ချင်ရင် တိုက်ပါ ..
တစ်ကယ်လာရင် တစ်ကယ်တိုက်မှာပေါ့လို့ချို
တိုးနယားရဲ့ ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင်ပေါ့… :harr:
နန်းခင်ဇေယျာလေးနဲ့ ငါနဲ့ညား (ဘာမှဆိုင်ဘူး) ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
ပြန်ပြောပြခြင်းမဟုတ်…။ ပြန်ရေးပြခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ၀ိနည်းလွတ်ပါသည်….။ တိုးနယားဟာ တစ်ကယ်ရှိမရှိဆိုတာတောင် (အမှန်ပြောရလျှင်) မသိပါ…။ ကိုပေပြောတဲ့ပုံဖတ်ပြီးမှ…………
မော်ဒယ်မလေးတွေပါတဲ့ပုံပြင်ပြောပြမယ်..။ ဘီယာတစ်ဂျား နဲ့ ပုရစ်ကြော်ပဲနော်
Snake Snake with Leg the see ဗျ “ကိုယ်ထိုင်ပေးရတဲ့ ဆရာသမားများက အိမ်ကွင်းပြန်ကစားကြဖို့ ဆိုပြီး အလျှိုလျှိုပြန်သွားကြတယ်” ဆိုတာ ကိုပေ က လဗြို ကြီးဆိုတာ ကြေငြာ နေတာပေါ့ ရွာထဲက မသိသေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို လေ။ ဟဲဟဲ မနေ့ ထဲက ဖတ်ပြီးသားဗျ ဝင်မန့်လို့ မရအောင် ကွန် နတ်ရှင် က တားထားလို့ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုပေသာဆိုရင် အဲလို ဖင်ကြီး လာလှန်ပြရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သိချင်စမ်းပ။
ကျုပ်ကို ဘီဘီရယ်၊ ပုရစ်ကြော်ရယ်၊ ဒညင်းသီးထောင်းရယ် ကျွေးရင် ပုံပြောပြမယ်။
မိပစ်ဘပစ် ထိုးထား ဖြစ်တော့တယ်
မောင်ပေ့ ရဲ့ ပို့ စ်လေးကို ဖတ်ရှုပြီးသကာလ ကွန်မင့်ဖြင့် ချီးမြှင့်တော်မူကြပါကုန်သော
ဒပ်ဗလျူ အို ဒပ်ဗလျူ
ဖတ်ရှုသွားသူ အားလုံးအား ကျေးဇူး အထူးစပါရှယ် တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား